Farmaajo oo shaaciyay hirgalinta go'aan ay horay u shaaciyeen Culimada Soomaaliyeed - Caasimada Online
Home Warar Farmaajo oo shaaciyay hirgalinta go’aan ay horay u shaaciyeen Culimada Soomaaliyeed
Farmaajo oo shaaciyay hirgalinta go’aan ay horay u shaaciyeen Culimada Soomaaliyeed
Muqdisho (Caasimada Online)-Madaxweynaha JFS Maxamed C/llahi Farmaajo ayaa goordhow ku dhawaaqay in maalinta talaadada ah la qaban doono munaasabad roob doon ah.
Madaxweynaha ayaa sheegay in munaasabadaasi looga danbeyn doono Culimada Soomaaliyeed waxa uuna tilmaamay in dalka ay kusii baaheyso abaarta loona baahan yahay in alle la weydiisto inuu ka dulqaado abaarta.
Madaxweynaha waxa uu sheegay in munaasabadaasi ay tahay mid lagu qaban doono dhammaan Gobolada dalka waxa uuna ku baaqay in Umadda Soomaaliyeed ay caloosha isku furaan si uu alle u ajiibo dacwadooda.
Madaxweynaha Somalia ayaa codkiisa ku biiriyay Gudiga abaaraha iyo Culimada oo dhawaan ku dhawaaqay in la dhigaayo isu soo bax roob doon ah.
Go’aanka Madaxweynaha, Guddiga abaaraha iyo Culimada ayaa ah in alle loo gacan taagto waxa ayna dhinacyadaani sheegen inay rumeysan yihiin in abaarta ay dhammaan doonto haddii alle la weydiisto barwaaqo.
Dhinaca kale, maalinta Talaadada ah ayaa waxa isu soo baxan roobdoonka ah lagu qaban doonaa magaalooyika Soomaaliyeed si ilaahay loo baryo.